Ady amin’ny pesta : Himo manerana ny boriborintany 6 | NewsMada
Ady amin’ny pesta : Himo manerana ny boriborintany 6
Hanaovana asa-tanamaro ao anatin’ny tetikasa Asa avotra mirindra ho amin’ny fanadiovana ny boriborintany enina eto Antananarivo hiadiana amin’ny aretina pesata sy hitsinjovana sahady ny fahavaratra. Iarahana amin’ny minisiteran’ny Mponina sy ireo fokonolona ifotony ity asa ity.
Misy ny fanadiovana ireo lakandrano maromaro any anaty tanàna hahafahan’ny rano mikoriana tsara rehefa avy ny orana. Tanjona ny hialana amin’ny fiakaran’ny rano rehefa fahavaratra.
Manodidina ny 9.000 ireo fokonolona misitraka ity asa tana-maro ity. 1.500 isaky ny boriborintany enina no manatanteraka izany. Haharitra telo andro ny asa.
Hizara roa ny asa ka hanadiovana ny lakandrano mirefy ny 250 m ny andiany voalohany mba hiarovana ny mponina anarivony amin’ny tondra-drano. Misy koa ny fanadiovana ny lakandrano mirefy 500 m, manondraka tanimbary maherin’ny 200 ha, iveloman’ny olona maherin’ny 10.000.
Mandray anjara amin’ny fampiasana ny kamiao vaventy enina ny Samva amin’izao fanadiovana izao. Natao izany hahafahana manala tanteraka ny fako mivoaka any amin’ny lakandrano.
Natomboka teny Ankorondrano Andrefana sy Ambohipo ary Mandrangobato ny Himo omaly. Mahakasika fokontany 53 ny fanadiovana. Nampandraisina anjara amin’ny fanaraha-maso ny asa sy ny ekipa ireo vaomiera eny ifotony izay ahitana solontena isaky fokontany.